भूपि शेरचन कालजयी सार्थकता | मझेरी डट कम
kbs — Sun, 10/05/2008 - 16:54
भूपि बसेको घरको चोकमा ढुङ्गाको एउटा कालो र चिल्लो मूर्ति थियो। त्यही चोकले उनलाई चोक जस्तो कविता रच्न प्रेरित गरेको हुनुपर्दछः
यो मेरो चोक
यहाँ सबथोक छ
देउताले बनाएको मान्छे
र, मान्छेले बनाएको देउता छ।
भूपिको हाजिरजवाफी प्रसिद्ध थियो। मैले भेटेका साहित्यकारमा भूपि र धच गोतामे नै बढी हाजिरजवाफमा पोख्त थिए।
एकपटक भूपिलाई भेट्न दिल्लीमा पढ्ने एक नेपाली छात्रा आएकी थिइन्। भूपि तिनताक बरखी बार्दै थिए, सेतो टोपी लगाउँथे। उनको लोकप्रियता त्यति माथि पुगेको थियो कि उनले भूपिलाई नै भेट्न भनेर काठमाडौँ आएको बताइन्। भूपिले उनलाई सोधे, “तपाईंको नाउँ के?”
भूपिसित प्रायः हिन्दीमा कुरा हुन्थ्यो। राम्रो हिन्दी बोल्थे। बनारसमा पढेकाले होला। अङ्ग्रेजी पनि राम्रो थियो।
एकदिन पारिजातको घरमा विभिन्न युवा साहित्यकारको कुरा चल्यो। एउटा कुरा भनिदिउँ, पारिजात र भूपिले नयाँ पुस्तालाई सधैँ प्रोत्साहन दिए। यस कुरामा पारिजात अझ्ै अघि थिइन्। सबैलाई सम्झ्ँदै जाँदा, भूपिले ध्रुव सापकोटाको एउटै कथाको नाउँ लिए, जिन्दगी अर्थात् टाइम बम। ध्रुव सापकोटाको त्यो कथा चर्चित पनि भएको थियो।
एक दिन खिचापोखरीको शेरे पंजाव रेस्टुराँमा कुरा गर्दागर्दै भूपिले त्यसका मालिकलाई आफूले लगाइराखेको 'मेगा घडी फुकालेर उपहार दिए। परिस्थिति यस्तो भयो, हामीले त्यहीँ कोठा लिएर सुत्नुपर्ने भयो। भोलिपल्ट चार बजे निद्रा खुल्यो। समस्या के आयो भने होटल मालिकलाई दिएको त्यो 'मेगा घडी कसरी फिर्ता लिने? भूपि माग्न नसक्ने। उनी मलाई भन्थे, तिमी माग। म भन्थेँ, एउटाले दिएको अर्कोले कसरी माग्ने। त्यो घडीको परिणाम पछि के भयो, अहिले मैले बिर्सें।
भूपिकी छोरी कविता जन्मेको थाहा छ। भूपि उनलाई कब्बु भनेर सम्बोधन गर्न रुचाउँदथे। उनी लेख्थिन् पनि। एक-दुई पटक भेट पनि भएको छ। अहिले धेरै भयो, देख्दिनँ।
भूपिको निधनपछि एक दिन मैले ध्रुव सापकोटालाई भनेँ, “भूपिकहाँ गएकै छैन। कान्ति भाउजूलाई पनि भेट्नुपर्ने। आज जाउँ।”
हामी सामान्य रूपमा घुम्दैफिर्दै गयौँ। कान्ति भाउजू र कवितासित पनि भेट भयो। तर एउटा अप्ठ्यारो जस्तो लाग्यो। त्यसैदिन भूपिको श्राद्ध परेको रहेछ। हामी पछि आउँछौँ भनेर हिँड्न चाहन्थ्यौँ। उहाँहरूले मान्दै मान्नु भएन। भन्नुभयो, “यो संयोग त्यसै जुरेको होइन।” हामी पितृ-प्रसाद खाएरै आयौँ। अचम्म पनि लाग्यो त्यस्तो संयोग परेकोमा।
भूपिको कविताको आज एउटा स्कूल बनिसकेको छ। कति नयाँ कविहरू भूपिबाट प्रेरित-प्रभावित छन्, त्यसको हिसाब छैन।
भूपि कुनै कविको उदाहरण दिएर भन्थे, “घाम, जून, कुकुरको पुच्छर― यस्तो कविता लेखेर के हुन्छ?”
हिमाल खबरपत्रिका २२७
कदम चाल्ने दाउ दिन्छन
खन खन दिलको खेत
भुलिदिन मन लाग्छ
सुन्यताका ति दरबारहरु , आज त्यसै भत्कियपछि
साहित्य बूढापाकाको मात्र क्षेत्र हो ? किन टाढिँदै छन् किशोरहरू साहित्यबाट